Naagta Ugu Naasaha Weyn Dunida oo Shaaca Laga Qaaday (Sawiro+Video) – make music movie Edition: International | Video
Published On: 25 June 2011 6:37 pm Life Style | By Taleex Media Naagta Ugu Naasaha Weyn Dunida oo Shaaca Laga Qaaday (Sawiro+Video)
Naagta ugu naasaha weyn dunida ayaa daboolka laga qaaday ka dib markii ay ka soo muuqatay barnaamij ka baxa TV ku yaala dalka Ingiriiska.
Ka soo muuqashada barnaamijka ee haweeneyda ugu naasaha weyn dunida ayaa daboolka ka qaaday dhibaatada maskaxiyan iyo muuqaal ee haysata naagtaasi.
Annie Hawkins-Turner ayaa la geliyay buuga diiwaanka dunida ee lagu magacaabo Guinness World Record iyadoo cabirka naasaheedana uu yahay 102ZZ culayskooduna yahay 51 KG.
Iyadoo ka qayb qaadaneysa barnaamijka lagu magacaabo “This Morning” ee ka baxa TV-ga ITV, ayaa ay Ms Hawkins-Turner sheegtay in naasaheedu koriimada bilaabeen markay jirtay sagaal sano, kuna kalifeen dhibaato maskaxeed markii ay weynaanayeen.
Waxaa kaloo ay sheegtay in ninkeedu kula taliyay in ay dunida u bandhigto dhibaatadan ka haysata naasaha isagoo markii hore ku booriyay in ay ku soo bandhigto naasaheeda mareegaha anshax xumada ee internetka taaso ay ka aqbashay.
Mr Hawkins-Turner waxaa ay intaa raacisay in ay la qabsatay culayska naasaheeda oo aysan hada dhib badan u arag.
” Markasta oo aan helo dhaqtar cusub wuxuu igula taliyaa in aan qaliin galo. Waxaan lee yahay dhabar adag waligayna ima uusan xanuunin dhabarka. Waxaan qaatay dhawr farsamo oo ku sabasan sidii aan u xajin lahaa culayska oo aanan dhibaato isugu gaysan”, ayaa ay u sheegtay dadweynihii ka daawanayay TV-ga.
” Mararka qaar waa ay I dhibtaa marka ay dadku I weydiiyaan ‘sidee u socotaa?’ curyaan ma ihi. Waxa kaliya ee aan lee yahay naaso waa weyn oo aan la qabsaday sidii aan u qaadi lahaa,” ayaa ay raacisay.
Inta badan dumarka leh naasaha waaweyn ayaa ka cawda dhibaatooyin ay ka mid tahay raaxo la’aan, dhabar xanuun, surka oo xanuuna iyo cuncun maqaarka ah iyo waliba ragga oo mar waliba si joogta ah u dawada marka ay banaanka u baxaa, dhar le eg oo ay ka waayaan dukaamada iyo awood daro ka haysata dhinaca jimicsiga.
Qaliinka lagu sameeyo naasaha yaa ah kan afraad ee ka dhaca dalka Ingiriiska maadam ay dumarka dalkaasi ku mashquulaan sidii ay muuqaal ahaan isu qurxin laahyeen, sanadii 2010 waxaa dalka Ingiriiska qaliin dhinaca qurxinta jirka dumarka lagu sameeyay 4,218 dumar ah.
Waraysi: Garaad Saleebaan Garaad Maxamed oo Waraysi xiiso leh bixiyey waxyaalo aanu hore uga hadlinna bayaamiyey!
Waraabaha(Dhurwaaga) oo ka qaxaya Koonfurta Soomaaliya, iyo Kenya oo arintaas walaac ka muujisay.
Nin & Naag isku Dhegay Xili Ay Sino ku guda jireen (Video)